Guyana Tourism Authority inoburitsa chirongwa che "Safe for Travel"
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Guyana Breaking News » Guyana Tourism Authority inoburitsa chirongwa che "Safe for Travel"
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hurumende Nhau • Guyana Breaking News • Health News • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Chinangwa chechirongwa ichi ndechekudzivirira nzvimbo dzakanyanya kubatwa uye dzinotambura nedenda reCOVID-19 pamwe nekuona hutano pamwe nekuchengeteka kwevafambi.
Chirongwa chitsva chekuvhura kushanya uye kuona kuti nharaunda nevashanyi vanoramba vakachengetedzwa
National COVID-19 Task Force kuongorora mabhizinesi ekushanya
Kuvhurwa parizvino kuri muchikamu chechitatu icho chaona kuwedzerwa kwendege dzekutengesa
Iyo Guyana Tourism Authority (GTA) yatanga meseji nyowani yekushambadzira yakasungirirwa kune yayo yakavandudzwa yekuongorora maitiro nekuda kwe COVID-19 yakanzi "Safe for Travel" iyo inoona iyo yekushanya muviri, yakapihwa mvumo neNational COVID-19 Task Force, kuongorora mabhizimusi ekushanya kuti vaone kuti vari kushanda mukati meNational Covid-19 Gazetted Safety Measure uye muchinzvimbo chekugamuchira kudzoka kwekufamba kwepamba uye kwepasi rose. Chinangwa chechirongwa ichi ndechekudzivirira nzvimbo dzakanyanya kubatwa uye dzinotambura nedenda reCOVID-19 pamwe nekuona kuti hutano nekuchengeteka kwemufambi zvinogara zviri pamberi pendangariro sekuenda kwacho kunovhurazve kushanya.
Mukupindura coronavirus, Hurumende yeGuyana yakanzura ndege dzepasirese dzevapfuuri kutanga 18 Kurume 2020, zvisinei iyo Guyana Civil Aviation Authority kubva ipapo yatanga danho rekutanga kuvhura nzira. Tsanangudzo dzadzo dzinotevera:
Phase 1 - 18 Kurume - 11 Gumiguru 2020: Ndege dzekudzokera.
Phase 2 - 12 Gumiguru 2020: Yakatemerwa inouya yekutengesa ndege kune vagari veGuyanese, vagari vechigarire, vafambi vekunze, vashandi vepasirese uye vamiriri.
Phase 3 - Mbudzi 2020 (munzvimbo kubva munaNdira 2021): Kuwedzera kwendege dzinouya dzekutengesa dzinobvumidza vekunze uye vafambi vekunze kupinda muGuyana.
Phase 4 - TBC: Kuwedzera kwendege dzinoenda mukati uye dzinoenda kunze kuti upe basa rakawanda revashanyi vari mukati uye vanobuda.
Kubva muna Ndira 2021, kuvhurwa uku parizvino kuri muchikamu chechitatu icho chaona kuwedzera kwendege dzekutengesa izvo zvino zvinobvumidza vekunze uye vafambi vekunze kuti vapinde Guyana. Nezvo izvi zvinouya nenjodzi yekuti hutachiona hunogona kupararira kubva kuvashanyi kuenda kune dzimwe nzanga dzeGuyana dzinotambura kwazvo munyika iyo yakaona yakaderera kesi mwero mudenda iri.
Kuchengetedza nharaunda idzi pamwe neruzhinji rwevanhu, vafambi vanoenda kuGuyana vanofanirwa kuendesa yakaipa PCR bvunzo kubva kune rakabvumirwa lab. Miedzo isina kunaka kubva mukati maawa makumi manomwe nemaviri ekusvika ichabvumidzwa kupfuura nendege. Nekudaro, kana iyo PCR bvunzo ikaitwa mukati memazuva mana kana manomwe ekufamba, mufambi achazodiwa kuti aite imwe bvunzo yePCR paanosvika kuGuyana opa bvunzo yakaipa. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kana mufambi achidikanwa kuti atore bvunzo kuGuyana, ichauya pamubhadharo wavo nemutengo weGY $ 72 (approx. £ 16,000).
Iyo 'Yakachengeteka Yekufamba' chirongwa chakaiswa munzvimbo seimwe nzira yekudzivirira huwandu hwevaGuyanese, kusanganisira nharaunda dzinotambura, uye vafambi zvakafanana. Tourism mabhizinesi anoongororwa munzira mbiri-nhanho. Kutanga, vanofanirwa kuendesa yavo Standard Operating Procedure (SOP) vachitsanangura mashandisiro akaita bhizinesi maitiro uye kutora matanho matsva ekudzivirira kupararira kwe COVID-19. Kana iyo SOP yangotumirwa, iyo GTA ichaita ongororo pane iro bhizinesi kuona kuti vari kusangana nezvinodiwa zvinotevera:
1.Signage (maoko geza, chifukidzo kupfeka uye munharaunda kure)
2.Temperature Kuongorora (calibrated thermometer tembiricha macheki)
3.Sanitisation - maitiro uye zvigadzirwa zvinoshandiswa
6. Kuongorora - marongero ebhizimusi ekuona kushanda kweSOP yayo
Pane imwe nguva bhizinesi rekushanyirwa rakaongororwa uye rikaonekwa se COVID-19 inoenderana neGTA uye National COVID-19 Task Force, mvumo inopihwa kuti bhizinesi ritange kushanda zvakare.
Pamusoro pezviyero zvitsva izvi, iyo GTA yakakwanisa kupa COVID-19 Mapakeji Ekutsigira kumatunhu emuno akasungirirwa kuketani yekukosha kwekushanya pakutanga mudenda. Nharaunda dzinoshingairira kuita marezinesi ekushanyirana uye kushanda neGTA dzakabatsirwa kubva pasuru yaisanganisira inokurudzira ecolab kuchenesa uye zvigadzirwa zvehutsanana, infrared thermometer, machira uye zvekusona zvekugadzira mamask, sprayers yehombodo yekuisa hutachiona zvivakwa nemikwende nezvimwe, uye zvikwangwani COVID19. Kune vemunharaunda vasina kubatikana mukushanya, mapakeji aya aisanganisira zvigadzirwa zvehutsanana, machira uye zvekusona zvekugadzira masiki nemasaini pa COVID-19. Iwo mapakeji ekutsigira akaunzwa nemusangano wekudzidzisa wakaitwa neEcolab uye vamiriri vebazi rezvehutano pamwe neGTA.